Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi Iley Waxaa Sameeyay Sirdoonka Itobiya oo Ugu Talagalay – Noora Afgaab
Cabdi Iley Waxaa Sameeyay Sirdoonka Itobiya oo Ugu Talagalay – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ December 24, 2014
Sidaan idiinku sheegay qoraalkaygii hore, arimaha ku saabsan ka sifaynta gudaha Ogadenya kooxdii ahaan jirtay Itixaadka, wuxuu ahaa go’aan kasoo baxay Itobiya ee ma’ahayn talaabo uu Cabdi iley ku dhaqaaqi karay hadaanu haysanin ogolaanshahaa. Waxaa kaloon idiin dul maray inuu Cabdi iley la mid yahay un boombalaha xargaha lagu dhaq-dhaqaajiyo ee loo yaqaano (Marionette), arintaana waxaan wax ka weydiiyay siyaasiyiin kala duwan oo yaqaana siyaabaha ay TPLF-tu ugu shaqaystaan dadka , kuwaasoo isku raacey inay Itobiya gaar ahaan Sirdoonka iyo Saraakiisha Sare ee Ciidanka Itobiya ee jooga qaybaha Ogadenya ay abuureen shaqsiyadda Cabdi iley, oo hanti iyo waqti badanna galiyeen say Cabdi uga ekaysiin lahaayeen halyay u kacay qabiilka Ogadeenka gaar ahaan, si shacabka raacsan ONLF ee gudaha iyo dibadaba jooga looga soo reebo. Talaadaana waxaa lahaa Meles Zanawi oo waliba ku amray saraakiisha iyo Sirdoonka Itobiya inay soo saaran Cabdi Iley. Ujeedada uu ka lahaa Meles arintaa waxay ahayd in laga dhex abuuro shacabka ciidan ay Itobiya kula dagaalanto jabhadda ONLF, oo gudaha iyo dibaddaba loo tuso in dagaalka ka socda Ogadenya uu yahay mid u dhexeeya qabiilada Somaliyeed ee daga halkaa, gaar ahaan Ogadeenka oo laba garab kala taageersan.
Barnaamijka ah in Hogaamiye loo abuuro shacabka Somalida Ogadenya waxaa la qorsheeyay intaanu Cabdi iley qabsanin xafiiska M/weynanimada, waxayna astaameeyeen guddi loo saaray arintaa, tilmaamaha shaqsigaa la abuurayo laga doonayo inuu yeesho sida;
1- Inuu daacad u noqdo TPLF ka dibna Itobiya.
2- Inuu noqdo shaqsi aan lahayn xeer qabta oo kula dhaqma shacabka argagixin ama ( Bullying – بلطجة.-)
3- Inuu jili (matali) karo filimka loo habeeyo isagoon ka bixin khadka. Iyo qodobo kale.
Waxay ii sheegeen dadkaan wareystaty in tijaabadii ugu horeysay lagaliyay ninkii ka horeeyay isaga waa Daauud axmaar, oo rajada ugu weyn laga lahaa maadaama uu aqoon dhaamay waqtigaa Cabdi iley, laakiin Cabdulaahi Lugbuur isagu wuxuu ahaa un ku sime inta laga helayo qof buuxiya tilmaamahii laga doonayay. Waxay intaa raaciyeen Cabdi Iley in loo sheegay iyo inkale ma ogin, hasa ahaatee mudaduu hayay xilka Hogaanka Nabadgalyada wuxuu muujinayay inuu yahay qofka kali ah ee buuxin kara tilmaamahii la doonayay. Sidaa ayaana loogu dhiibay jagada, waliba waxaa la sheegayaa in Adisababa looga yeedhay intaan lagu magacaabin M/weyninimada oo loo tababaray habka la doonayo inuu ula dhaqmo shacabka iyo waxyaabaha ay tahay inuu iska ilaaliyo.
Cabdi iley barnaamijkii loo dajiyay dad badan waxay aaminsan yihiin in siday ahayd uu uga soo baxay gaar ahaan shantii sanee ugu horeysay xukunkiisa. Qaar kalena waxay aaminsan yihiin inuu ka badbadiyay, taasoo dhaawac gaadhsiisay sumacadii Itobiya inkastoo ay Itobiya saartay dabool adag, hasa ahaatee baqdin ay jirto in maray noqotaba la ogaan doono.
Hadaba barnaamijka loo dajiyayna muxuu ka koobnaa?
1- Laynta shacabka gaar ahaan reer miyiga. Arintaa ciidanka Itobiya ayaa doonayay oo aaminsanaa in haddii sidaa la yeelo ay ONLF la mid noqonayso haad geed uu ku dago waayay oo siduu u duulayay soo dhacay.
2- Inuu cabsida iyo argagaxinta gaadhsiiyo meel sare oo qofka u dhashay Ogadenya uu naftiisa iyo midda reerkiisaba u cabsado.
3- In la aaminsiiyo dadweynaha Itobiyaanimada oy ku faanaan dhaqan/afka/diinta Itobiya intaba. Arintan ayaa sidoo kale la faraa safaaradaha Itobiya iyo maamulada ay Itobiya ka samayso Somaliya.
4- Qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in dilka iyo faraxumaynta shacabka ay fuliyaan Somalida, ciidanka Itobiya ee dhabta ahna noqdaan qaar mararka qaarkood shacabka u hiiliya oo ka celiya.
Nimanka Wayanaaha ee xukunka haysta oo soo jabhadeeyay waxay arkeen in hadday iyagu laayaan shacabka ay sii cararayaan, hasa ahaatee marka kuwa laynaya ay noqdaan Somali ay iyagu noqonayaan kuwa badbaadinaya. Waxay yidhaahdeen siyaasiyiinta aan arintaa wax ka wediinay, Cabdi iley waxaa isaga loo tusay inuu yahay ninka amniga laga doonayo inuu sugo, oo haduu ku guulaysan waayo la badalayo. Waxaa arintaa ay keentay bay yidhaahdeen inuu meeshay Itobiya ugu talagashay in 10 lagu dilo uu ku dilay ugu yaraan 50.
Sharaxaadaa aniga kuma raacsani umana malaynayo inay Itobiya, gaar ahaan kooxda Wayaanaha ah ee xukunka haysata ay ka naxariis badan yihiin Cabdi iley, sababtoo ah hadday sidaa ay sheegayaan ay jirto waa hore ayay kala hadli lahaayeen laynta shacabka oy ogyihiin inuu Cabdi iley ku fasaxaya, walibana ku dalacsiiyo dhalinyarada la daroogeeyo ee Liyu Booliska ama Hawaarinta la dhaho.
Waxaan qaybaha dambe kaga hadli doonaa sida Cabdi iley loogu ekeysiiyay Hogaamiye u kacay reerka oo geesi ah iyo ujeedada ay ka lahaayeen sirdoonka Itobiya iyo natiijadii ka dhalatay.